Ejeree - Wikipedia
Aanaan Ejeree aanolee naannoo Oromiyaa keessaa tokko yoo ta'u Godina Shawaa Dhihaa keessatti argama. Aanaan kun karaa kibbaa Godina Shawaa Kibba Lixaatin, karaa dhihaa aanaa Dandiitin, karaa kaaba-dhihaa aanaa Jalduutin, karaa kaabaa aanaa Meettaa Roobitiiin, karaa kaaba-bahaa aanaa Ada'aa Bargaatin fi karaa bahaa aanaa Walamaraatin daangeffamee argama. Magaalaa guddaan aanaa kanaa Addis Aalam jedhama.
Ka'umsa Laga Awaash kan ta'e Tulluun Warqee aanaa keessatti argama. Ji'a Hagayyaa bara 2006tti, lolaan aanaa kanarraan miidhaa guddaa geessise. Aanaa kana keessaa - Sabbata, Awaasii fi Iluu dabalatee - namoota 14,790 kan miidhaman yoo ta'u 2,052 kan ta'an ammoo qe'ee isanirraa buqqa'an.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Ejeree&oldid=25831" irraa kan fudhatame
Last edited on 27 Haggaya 2014, at 12:49
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 27 Haggaya 2014, sa'aa 12:49 irratti.